Ihe ịhụ na Tetouan | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Tetouan
Emi odude ke edere edere Morocco ye ke ekpri mben Rif, Tetouan bu obodo nwere otutu njirimara Andalusia na Morocco. Ọ bụ isi obodo nke ndị na-echebe ndị Spain na mbido narị afọ nke XNUMX wee mara aha ya bụ "Paloma Blanca" n'ihi ncha ọcha nke medina ya na ụda ụlọ nke narị afọ nke XNUMX.
Ọ bụ obodo nke ndị njem mba ofesi na-agakarị nke wuru onyoonyo nke obodo cosmopolitan. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga leta Tetouan na ezumike ọzọ gị, ka ịghara ịlafu ihe ọ bụla, anyị na-agwa gị njem dị mfe maka n'okporo ámá ya.
1 Medina nke Tetouan
2 Kedu ihe ị ga-ahụ na medina?
3 Mgbasawanye nke Tetouan
Medina nke Tetouan
Medina nke Tetouan nwere amara pụrụ iche nke na-eme ka ọ bụrụ nleta a na-apụghị izere ezere. Ejiri brik, ashlars na wayo mee ya, ọ na-echekwa ọdịdị ya na ihe owuwu nke Unesco kwupụtara na ọ bụ World Heritage Site na 1997.
Mgbidi ahụ na-echebe mpaghara ise mejupụtara ya: al-Ayun, Trankats, al-Balad, Souiqa na Mellah. Site na gburugburu mgbidi nke kilomita ise, ọnụ ụzọ asaa mepere ma mechibidoro maka ihe nchekwa na mgbede.
Mgbidi ndị a chebere medina ochie, ebe ndị dị jụụ na okporo ụzọ ya ndị dị warara. N'oge a, ọ bara uru ịga njem n'okporo ámá ya na-ekwo ekwo ma jupụta na ụlọ ahịa na ebe a na-ere ahịa yana akụkụ ndị mara mma.
Kedu ihe ị ga-ahụ na medina?
Otu n'ime epic epupụta nke Tetouan bụ Plaza de Hassan II (nke a na-akpọbu Plaza de España n'oge nchekwa), ebe nzukọ dị n'etiti medina na Ensanche. Onye isi ala eze na-elekọta ya, n'ụdị Hispano-Muslim ma nwee ihe ncheta ndị ọzọ dị mkpa dịka ụlọ alakụba Pasha Ahmed ibn Ali al-Rifi na zawiyas abụọ nwere minarets ndị a chọrọ mma.
Na-esote obí eze, Bab Ruad arch na-eduga anyị na souks site na Tarrafin Street, otu n'ime isi n'okporo ámá nke obodo ahụ jupụtara na akwa na ụlọ ahịa ọla.
Na ngwụcha nke okporo ụzọ a, anyị ga-erute na square Suq al-Hut, nke dị ugbu a ụlọ ahịa akwa na akwa ma ọ bụ ebe azụ azụ. Site na ebe a ị nwere ike ịhụ mgbidi na ụlọ elu nke Kasba ochie nke Sidi Ali al-Mandri.
Foto | Nlegharị anya Morocco
Gafere n'okporo ámá Kasdarin, ị ga-abanye na square Ghersa al-Kebira, otu n'ime ndị kasị ibu na medina nke Tetouan na ebe ị nwere ike ịchọta ihe mgbe ochie na akwa akwa abụọ. Gburugburu ya enwere funduq ochie (ụlọ ndị ọbịa maka ndị ahịa na kamel ndị ọzọ) na Lucas madrassa nke malitere na narị afọ nke XNUMX.
Site na square a, anyị nwere ike ịnweta Mqaddem Street, nke na-akpọrọ anyị gaa Lucas Mosque nke a maara maka minaret ọcha. Gbaso ụzọ ahụ, ị ​​banyere square Suq al-Fuqqi, site na ebe ị nwere ike ịhụ minaret nke ụlọ alakụba Sidi Ali Barak, nke ejiri taịlị polychrom chọọ ya mma.
N'isochi uzo nke okporo ámá, otu rutere n'okporo ámá Mtammar, na njedebe nke ọnụ ụzọ ámá ígwè abụọ mechiri ụzọ nke ụlọ mkpọrọ ebe ndị Kraịst jidere. Nke dị nso bụ square al-Wissa'a, nke isi iyi ya bụ otu n'ime nkwekọ kachasị na medina ahụ, nke na-enyekwa ya ohere ịbanye na agbataobi al-Balad, nke kachasị ukwuu na nke Tetouan.
Anyị na-aga n'okporo ụzọ Siyaghim, anyị gafere Suso Ali Ben Raysoun mausoleum, nke ama ama maka octagonal minaret nke ejiri taịl na-etolite. Na medina nke Tetouan ọ dịkwa mma ileta nnukwu ụlọ alakụba mara mma, nke kachasị ukwuu. Enwere ike ịhụ minaret ya n'ebe ọ bụla na medina ya ma bụrụ nke ụdị ndị Alawite. Dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ alakụba Moroccan niile, ndị na-abụghị ndị Alakụba agaghị eleta nnukwu ụlọ alakụba nke Tetouan.
Mgbasawanye nke Tetouan
Foto | Kpọtụrụ
Tetouan bụ isi obodo nke Spanish Protectorate na North Africa ruo 1956. Ọ bụ ya mere na mgbasawanye nke obodo ị nwere ike ịhụ ihe ndị e dere n'oge ahụ, dịka Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị Anyị nke Mmeri (1919) na mpaghara Moulay El Mehdi ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọchịchị mara mma.
Eachlọ nke ọ bụla dị na Tetouan nwere ihu na mbara ihu dịtụ iche, mana ejiri ihe ọcha ha jikọtara ya na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Tetouan mara mma.
Enwere ike ịchọta ihe ndị ọzọ mere n'oge gara aga nke Spanish Tetouan n'akụkụ Plaza del Palacio Real, ebe ị ga-ahụ Thelọ ihe nkiri Spanish, otu n'ime akara ngosi nke nkeji iri na ise nke Tetouan nke Spanish.
Ebe ndị ọzọ dị mkpa bụ Spanish cha cha ochie (20s) General Library na Archives nke Tetuán (30s).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Ihe ị ga-ahụ na Tetouan
Ihe ị ga-ahụ na Medinaceli